“Dil Toogasho Ah Ayuu Mutaysan Karaa Qofkii Lunsada Hantida Ummadda…” Wasiirka Maaliyadda Maamulka Puntland – somalilandtoday.com
“Dil Toogasho Ah Ayuu Mutaysan Karaa Qofkii Lunsada Hantida Ummadda…” Wasiirka Maaliyadda Maamulka Puntland
(SLT-Garoowe)-Wasiirka Maaliyadda maamul gobolleedka Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dil toogasho ah lagu fuliyo qofkii ay ku cadaato inuu lunsado hantida dowladda iyadoo la adeegsanayo xeerkii ciqaabta Soomaaliyeed ee dowladii Maxamed Siyaad Barre.
Wasiirka ayaa hadalkan jeediyay mar uu shaly kormeer ku tegay dekedda magaaladda Boosaaso. Wasiirku wuxuu kaloo sheegay inay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah Shaqaalaha maamulka Puntland oo uu sheegay in loo xirxirey arrimo la xidhiidha musuq maasuq, foojari iyo lunsasho lacageed.
“Waxaa jira dad aan ku soo qabqabanay foojari iyo lacago ay dhunsadeen. Maxkamad ayaanu saari doonaa, Ma dhici doonto qof hantidii ummada leedahay qaatay in la yiraahdo shaqadaa laga cayriyay. shaqada ka cayrin mayno, waa soo qabanaynaa, waa xiraynaa oo maxkamada ayaanu gaynaynaa. wixii uu maxkamadaas ka helo buu helayaa” Sidaas waxaa yidhi Wasiir Xasan Shire
“Waad ogaadeen Soomaaliya toogasho ayay ahaan jirtay. Xad (limit) waxaa jiray qofku toogasho noqonayo haddii hantida ummada uu qaato. xadkaasi hadda wuu jiray oo sharcigii Soomaaliya ayuu ku dhaqmayaa, waa dhici kartaa Xad uu qofku toogasho ku gali karo, Madaama shuruucda aynu hadda haysanaa ay yihiin kuwii hore, ama ha noqoto xabsi daa’in ama ha noqoto toogasho. wixii maxkamadu soo saarto waa ku fulinaynaa si looga haro in la xalaalaysto hantida ummadu leedahay” ayuu sii raaciyay
Dhinaca kale, Wasiirku wuxuu uga digay shaqaalaha wasaaradda Maaliyada iyo shaqaalaha kale ee dowladda Musuqmaasuqa iyo lunsashada hantida dowladda, isagoo amar ku siiyay Booliiska iyo laamaha amniga inay soo qabtaan qofkii ku kaca Musuqmaasuq.